Kundo: Age of the Rampant (2014) | MM Movie Store
ဗလခပျတောငျ့တောငျ့ဒီမငျးသားဟာ Along with the Gods, Unstoppable ,The Outlaws တို့မှာ ပါဝငျခဲ့ပွီးတော့ သရုပျဆောငျစဉျမှာလညျး ရိုးသားဟနျတှပေျေါနတေဲ့ သူ့အမူအရာကွောငျ့ မွနျမာပရိတျသတျတှအေကွိုကျဖွဈခဲ့သလို
တဈခကျြတဈခကျြ ထိုးလိုကျရငျအုနျးသီးခပျကွီးတဈလုံးလောကျရှိတဲ့ သူ့လကျသီးကွောငျ့ခုနှဈ ခုနှဈလီ ၄၉ပလေောကျလှငျ့သှားတာလညျး အားရစရာကွီးပါပဲ…
ဒီကားထဲမှာလညျးသံလုံးကွီးတှကေိုလကျနကျအဖွဈအသုံးပွုတဲ့သိုငျးသမားအဖွဈပါဝငျထားပါတယျ…နောကျပွီးတော့ ခေါငျးဆောငျမငျးသားဖွဈတဲ့ Jung-woo Ha ကိုတော့ အထှအေထူးမိတျဆကျစရာမလိုပါဘူး..သူရိုကျသမြှကားတိုငျးဟာကောငျးမှနျတယျလို့တောငျမှတျကောကျြတငျခံရတဲ့သူပါ….
ဒီကားက ဂြိုဆှနျးခတျေက အရငျးရှငျတှေ မငျးမှုထမျးတှကေ တောငျသူလယျသမားတှအေပျေါနဲ့ခြို့တဲ့သူတှကေိုအနိုငျကငျြ့တဲ့အတှကျကွောငျ့ သိုငျးပညာတျောတဲ့သူတှစေုပွီး တှနျးလှနျတဲ့အကွောငျးကိုရိုကျပွထားတာပါ…
ဇာတျလမျးဇာတျကှကျလညျးကောငျးသလို ပါဝငျတဲ့သရုပျဆောငျတှကေလညျး ကိုရီးယားရဲ့ နာမညျကြျောတှကွေီးပဲစုရိုကျထားသလားမှတျရပါတယျ…ပွီးတော့ အကျရှငျခနျးပေါငျးမြားစှာပါဝငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ Action ကားကောငျးကွိုကျတဲ့သူတှအေဖို့လကျမလှတျသငျ့ပါဘူး…
ဗလခပ်တောင့်တောင့်ဒီမင်းသားဟာ Along with the Gods, Unstoppable ,The Outlaws တို့မှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်စဉ်မှာလည်း ရိုးသားဟန်တွေပေါ်နေတဲ့ သူ့အမူအရာကြောင့် မြန်မာပရိတ်သတ်တွေအကြိုက်ဖြစ်ခဲ့သလို
တစ်ချက်တစ်ချက် ထိုးလိုက်ရင်အုန်းသီးခပ်ကြီးတစ်လုံးလောက်ရှိတဲ့ သူ့လက်သီးကြောင့်ခုနှစ် ခုနှစ်လီ ၄၉ပေလောက်လွင့်သွားတာလည်း အားရစရာကြီးပါပဲ…
ဒီကားထဲမှာလည်းသံလုံးကြီးတွေကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့သိုင်းသမားအဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်…နောက်ပြီးတော့ ခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်တဲ့ Jung-woo Ha ကိုတော့ အထွေအထူးမိတ်ဆက်စရာမလိုပါဘူး..သူရိုက်သမျှကားတိုင်းဟာကောင်းမွန်တယ်လို့တောင်မှတ်ကျောက်တင်ခံရတဲ့သူပါ….
ဒီကားက ဂျိုဆွန်းခေတ်က အရင်းရှင်တွေ မင်းမှုထမ်းတွေက တောင်သူလယ်သမားတွေအပေါ်နဲ့ချို့တဲ့သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့် သိုင်းပညာတော်တဲ့သူတွေစုပြီး တွန်းလှန်တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ပြထားတာပါ…
ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်လည်းကောင်းသလို ပါဝင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ကိုရီးယားရဲ့ နာမည်ကျော်တွေကြီးပဲစုရိုက်ထားသလားမှတ်ရပါတယ်…ပြီးတော့ အက်ရှင်ခန်းပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Action ကားကောင်းကြိုက်တဲ့သူတွေအဖို့လက်မလွှတ်သင့်ပါဘူး…